अमेरिकी नागरिकता लिएको व्यक्ति नेपालमा गिरफ्तार भएमा अमेरिकी दूतावासले के गर्छ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय विदेशका कारागारमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूप्रतिको निष्पक्ष तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक तथा वैदेशिक कानून अनुरूप अमेरिकी दूतावासको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेसम्म दूतावास जेलमा रहेका अमेरिकी नागरिक र तिनका परिवारहरूको सहयोगका लागि हमेसा तयार रहन्छ ।
नेपालको कानून उल्लङ्घन गर्ने जोकोही पनि स्थानीय कानूनी प्रणाली अन्तर्गत अभियोगको भागी हुन्छ । यदि नेपाली अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहराई जेल सजायको आदेश दिएको खण्डमा उक्त व्यक्तिले आफ्नो सजाय नेपाली कारागारमै कटाउनुपर्दछ । अमेरिकी राहदानी बोक्ने व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धमा कुनै विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन । साथै विशेष छुट प्राप्त गर्ने वा अमेरिकी न्याय प्रणालीले प्रत्याभूति गरे अनुरूपका विभिन्न कानूनी अधिकार उपलब्ध हुने कुराको कसैले पनि अपेक्षा गर्नु हुँदैन ।
विदेशमा पक्राउ पर्नबाट जोगिनका लागि
– नेपालका कानून तथा नियमहरूको पालना गर्नुहोस् ।
– नेपालका कानून बुझ्नुहोस्, जुन अमेरिकाका कानूनभन्दा भिन्न हुनसक्छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले तत्सम्बन्धी सान्दर्भिक जानकारी नेपालको राष्ट्रविशेष पृष्ठमा उपलब्ध गराएको छ ।
यदि तपाईं वा तपाईंले चिन्ने अमेरिकी नागरिक विदेशमा पक्राउ परेमा
– जेलका अधिकृतलाई अमेरिकी दूतावासमा खबर गर्न लगाउनुहोस् ।
– तपाईं आफैले पनि सिधै दूतावासलाई सम्पर्क गरी गिरफ्तारी बारे जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । तपाईंले दूतावासको अमेरिकी नागरिक सेवा इकाइलाई +९७७१४२३४००० मा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । कार्यालय समयभन्दा बाहिर सम्पर्क गर्दा [email protected] मा ईमेल गर्न सकिन्छ । अमेरिकी नागरिक सेवा इकाइले त्यसको भोलि पल्टको कार्यालय खोल्ने दिनमा नयाँ मुद्दा खोल्नेछ र सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछ ।
अमेरिकी बन्दीहरूका लागि कन्सुलर सेवा
जब कुनै अमेरिकी नागरिक विदेशमा पक्राउ पर्छ, ऊ शुरुशुरुमा अल्मलिन र हराएजस्तो महशुस गर्नसक्छ । त्यस्तो बन्दीलाई अझ बढी गाह्रो किन पनि हुन्छ भने ऊ अपरिचित वातावरणमा हुन्छ र उसले स्थानीय भाषा, रीतिरिवाज वा कानूनी व्यवस्था बुझेको नहुनसक्छ ।
अमेरिकी दूतावासले यसरी मद्दत गर्न सक्छ
– अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने स्थानीय वकिलहरूको सूची प्रदान गर्न सक्छ ।
– हिरासतमा रहेको अमेरिकी नागरिकको लिखित मन्जुरीमा उसको परिवार, साथीभाइ वा रोजगारदातालाई सम्पर्क गरिदिन सक्छ ।
– जेलमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई नियमित रूपमा भेट्न जानुका साथै उपयुक्त भएसम्म पठनपाठनका सामग्री र भिटामिन समेत प्रदान गर्न सक्छ ।
– जेलका अधिकारीहरूले उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराए नगराएको सुनिश्चित गर्छ ।
– स्थानीय फौजदारी न्याय प्रणालीबारे सामान्य जानकारी प्रदान गर्द अनुरोध गरिएको खण्डमा कैदीले मान्ने धर्मका पादरी, धर्मगुरु जस्ता धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग भेट गराउनसक्छ ।
– प्रवासी नागरिक सेवा कोषको स्थापना गर्नसक्छ, जसमा साथीभाइ तथा परिवारजनले कैद अमेरिकी नागरिकका खाद्य, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यकताहरूका लागि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
अमेरिकी दूतावासले गर्न नसक्ने कुराहरू
– अमेरिकी नागरिकलाई विदेशी जेलबाट निकाल्न सक्दैन ।
– कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष छ भनेर अदालतमा बयान दिन सक्दैन ।
– विदेशका अदालतमा अमेरिकी नागरिकलाई कानूनी सल्लाह दिन वा उसको पक्षमा लड्न सक्दैन ।
– आधिकारिक दोभाषे वा अनुवादकका रूपमा कार्य गर्न सक्दैन ।
– विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकको कानूनी, स्वास्थ्यसम्बन्धी वा अन्य शुल्क व्यहोर्न सक्दैन ।
– कैदीको अनुमति बिना उनीहरूको जानकारी अरुसँग खुलासा गर्न सक्दैन ।
श्रोत: अमेरिकी दूतावास काठमाडौं
डिभी विजेताले डीएस २६० फर्म भर्दा ध्यान नदिए ग्रिनकार्ड हराउने र सोसल सेक्युरिटी नम्बर ढिलो
डिभी विजेताहरुले भिसा प्रकृया अगाडि बढाउन डीएस २६० फर्म भर्नुपर्छ । डिभीका लागि लागि छनौट
अमेरिकी नागरिकता लगायतका युएससीआईएसका कैयन फर्महरु अनलाइनमा उपलब्ध छन् । अनलाइनमा फर्म भरेर अनलाइनबाटै शुल्क
डिभी २०२३ बारे नेपालीमा निर्देशिका जारी, भर्ने तरिका र विवरणसहित ३९ महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ
(नोट: अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको डिभी सम्बन्धी निर्देशिकाको नेपाली अनुवादको श्रोत अमेरिकी दूतावास काठमाडौं
अमेरिकाको कुन कुन भिसाका लागि कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन अनिवार्य छ ?
अमेरिकाले सबै आप्रवासीभिसा र केही गैर आप्रवासी भिसाका लागि समेत कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन अनिवार्य बनाएको छ